‘Mhanzi ngaive inovaka’
You are at:Home»Ngoma Nehosho»‘Mhanzi ngaive inovaka’
By Abel Ndooka on	 January 5, 2018 · Ngoma Nehosho
MUIMBI ane mukurumbira mumusambo weAfro-fusion, David “HD” Hondoyedzomba anoti mhanzi inofanira kuve nechainovaka muvanhu kwete kuti vangonakidzwa nayo chete.
“HD” – uyo anozivikanwa nenziyo dzakawanda dzinosanganisira ‘Bhora Mberi’ na’Baba Munenge Rombe’ iyo akaimba naSuluman Chimbetu – anoti mhanzi ngaive ine chainodzidzisa. Anoti ibasa revaimbi kuparidza hunhu hwakanaka kuburikidza nemhanzi.
“Vaimbi tese tikaita chitsidzirano chekuti tiimbe mhanzi inovaka, ndinofunga zvakashata zvese zvatinoona zvichiitika munyika kana pasi rese zvinopera. Izwi redu sevaimbi rine mutsindo uye kazhinji zvatinoimba ndizvo zvinoitika munyika sezvo tinozviona zvichiitika, vana vechidiki vanoterera uye votevedzera zvinenge zvichiimbwa,” anodaro.
Anoenderera mberi achiti, “Zvino tikaimba zvinyadzi kana zvinokurudzira mhirizhonga tinenge tichitouraya vana nekuvakanganisa ramangwana ravo.” Parizvino “HD” akwanisa kutsikisa madambarefu maviri anoti ‘Uncle Sam’ na’Bhora Mberi’ uye gore rino muimbi uyu ari kuvimbisa kubura rechitatu iro anoti rinofanirwa kudzidzisa hunhu hwakanaka.
“Gore rino nderangu, ndiri kuona shanduko ichiuya. Ndiri kutsikisa mhanzi inoparidza tsika nemagariro akanaka. Ndizvo chete zvinongodiwa kana Mwari vanopindira vokutungamira kana uchiimba mhanzi ine chirevo chakanaka,” anodaro.
Idya sadza nezondo